ANDRIANIAINA Fidelis - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Teraka tamin'ny Septambra 1981 Tao Alasora ny tenako, zaza lahimatoa ao amin'ny iray tam-po, io ambony io ny anarako fa ny solonanarana dia Renaldi na iTsoraka!.
Olona tia sy mankafy ny teny malagasy aho ary tia ny kolontsaina malagasy koa, ohatra ny tononkalo, ny kabary, ny angano, ny hainteny, ...
Amiko, manana lafiny maro ny tononkalo. Ny amin'ny maha-kanto azy aloha ny voalohany amin'izany, toa mahafinaritra ery ny mamaky azy, rehefa lasa iny ny andininy roa na telo, dia mahatonga saina mihitsy fa toa hain'ilay mpanoratra ny mamoaka ireo teny mahalaza ny ao am'ponao nefa tsy voalazanao. Io lafiny io no mampiavaka indrindra ny mpanoratra amin'ny olona tsotra.
Ny lafiny fakaroa indray, mahakasika ny fiantraikany amin'ny fiainanan'ny mpanoratra manokana. Isan'ny vahaolana iray tsy azo idifiana ny fifampizarana izay manjo na tsara io na ratsy. Ka eo am-panoratana ny mpanoratra izay, eny na dia fantatra aza fa mbola tsy miantefa any amin'ny mpamaky akory izay tiana holazaina, dia efa mahatsiaro sahady ho toy ny efa misy olona hizarany izany manjo azy izany izy, noho io tranga io, dia mitoetra ho fanafody ny tononkalo.
Ary lafiny fahatelo farany, afaka sokajiana ho isan'ny fitaovam-pitolomana ny tononkalo. Misy manko trangam-piaraha-monina iray na maromaro tsinjon'ny mpanoratra, ka rehefa irery iny izy dia mandray penina ka indry mifokofoko mitanisa ny tsindry hazo lena mahazo ny valalabemandry, na ny fanivaivana ny olona sokajian'ny sasany ho ambany saranga, na fahaizana na fahendrena. Rehefa mamaky ny karazana tononkalo mahakasika io lafiny io ny olona iray, dia mahatsapa fa tsy miady irery izy eo amin'ny olana mahazo azy, izay dia efa mety ho fanoitra iray mampitraka azy eo amin'ny fiainany ka hananany fanantenana vaovao. Noho io lafiny io, afaka ambara fa fanafody iraisan'ny olona mitovy olana ny tononkalo.
Hamaranana ny tafa, tsarovy foana fa ny famakianao tononkalo iray dia mitondra sombin-panafody kely eo amin'ny fiainanao, ary ny olona tia tononkalo ihany no mahalala an'izany.
Nampiditra : renaldi
Daty : 28/01/2005
Mpamangy : 3951
aiza toa very?
fid é lis